तपाईँको निन्द्रा पुगेको त छ ? | | Nepali Health
कुन उमेरका व्यक्तिलाई कति निन्द्रा आवश्यक ?
२०७३ जेठ २९ गते १९:२२ मा प्रकाशित
आम मानिसले निदाउनुलाई मस्तिस्क र शरीरका अंगहरु आराम गर्ने बेलाका रुपमा लिन्छन, तर त्यसो मात्रै पनि होइन । किनभने निदाएको समयमा कतिपय अंगहरुले झनै महत्वपूर्ण काममा संक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने हुन्छ वा गरिरहेको हुन्छ ।
कति सयमको निद्रा भनेर अहिलेसम्म कसैले समयसिमा तोकेको छैन । लामो होस वा छोटो जो पनि जुनसुकै बेला निदाउन र व्युझिन सक्छ । तर बैज्ञानिकहरुले निद्राका बेलामा हुने कामका बारेमा भने केही तथ्यहरु फेला पारेका छन् ।
निदाएका बेला शरीरमा के काम हुन्छ ?
-निदाएको बेला मस्तिस्कका कोषहरुले स्मरणलाई चुस्त बनाई सञ्चय गर्ने काम गर्छ ।
-दिनभरको दौरान हामीले केके देखेका हुन्छौ । अनुभव वा अनुभूति गरेका हुन्छौ सोचेका हुन्छौ । भेटेका हुन्छौ त्यो सबै मस्तिस्कमा अस्थ्यायी रुपमा जम्मा भएर बसेको हुन्छ । राती निदाएको बेलामा हाम्रो मस्तिस्कका कोषहरुले दिनभर अस्थायी रुपमा जम्मा भएका कुराहरुलाई छानेर प्राथमिकताका आधारमा जम्मा गर्ने काम गर्छ । मस्तिस्कमा कुन कुरालाई छोटो समयका लागि जम्मा गर्ने वा कुनलाई लामो समयको सम्मको लागि जम्मा गर्ने भन्ने काम पनि निदाएकै बेलामा हुने गर्छ ।
-निदाएको बेलामा मस्तिस्कमा अस्थायीरुपमा जम्मा भएका सूचनाहरु थप चुस्त बनाई दीर्घकालिन स्मरणमा पठाउने का हुन्छ जसलाई कन्सोलीडेसन भनिन्छ ।
-निदाएका बेला दिनभर क्रियाशिल भई थाकेका अंगहरुमा पुर्न ताजगीका साथ स्फुर्ति बढाउन मद्धत गर्छ ।
-मांसपेशीको बृद्धि हुने काम पनि निदाएको बेला हुन्छ ।
-बिग्रेका कोष तंन्तुहरु बनाउने काम पनि निदाएका बेलानै हुन्छ ।
-शरीरका ग्रन्थीहरुबाट हर्मोन निस्कने काम पनि निदाएका बेला नै हुनेगर्छ ।
-ब्रेनमा भएको नचाईने रासायनिक पदार्थहरु राती निदाएकै बेलामा हटने वा सफा हुने काम हुन्छ ।
को कति समय निदाउनु राम्रो ?
स्वस्थ सुताई सबैलाई जरुरी हुन्छ । मस्तिस्कमा भएको सूचनाहरु प्रक्रियामा लैजान । थाकेका मांसपेशी पुर्नर्ताजगीका लागि पनि सुत्न जरुरी हुन्छ । भर्खर जन्मेको बच्चालाई धेरै सुत्नुपर्छ । किनकी साना बच्चाहरुले दिनभर सिकेको कुरा मस्तिस्कमा प्रोसेसिंग गर्न धेरै समय लाग्छ । तर उमेर बढदै जाँदा सुत्नेक्रम पनि घटदै जान्छ ।
अमेरिकास्थित नेशनल स्लिप फाउण्डेसनले कुन उमेरका मानिसले कति समय निदाउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो भनेर सूची तयार पारेको छ ।
जस अनुसार ….
भर्खर जन्मेर ३ महिना हुँदासम्म १४ देखी १८ घण्टा सम्म निदाउनु स्वास्थ्यका लागि राम्रो ।
४ देखी ११ महिनाका बच्चाहरु १२ देखी १५ घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
१ देखी २ बर्षसम्मको बच्चाहरु ११ देखी १४ घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
३ देखी ५ बर्षसम्म १० देखी १३ घण्टा घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
६ देखी १३ वर्षसम्मको बच्चा ९ देखी ११ घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
१४ देखी १७ बर्षसम्मको किशोर किशोरी ८ देखी १० घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
१८ देखी २५ बर्षको युवाहरु ७ देखी ९ घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
२६ देखी ६४ बर्षसम्मका व्यक्ति ७ देखि ९ घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
६५ देखी माथिका ७ देखी ८ घण्टासम्म निदाउनुपर्छ ।
म्याद गुज्रेको औषधि विक्री गरेको आरोपमा १५ जना पक्राउ